Izindatshana zikaTom Siani zivuliwe Martech Zone
Imibhalo nge UTom Siani
UTom unguchwepheshe wokumaketha online onolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-5 kule mboni yedijithali. Ubuye asebenzisane neminye imikhiqizo eyaziwayo ukuze akhiqize ithrafikhi, akhe imingcele yokuthengisa, futhi andise ukuthengiswa online. Ubhale izindatshana eziningi ezimayelana nokumaketha imithombo yezokuxhumana, ukumaketha umkhiqizo, ukubhuloga, ukubonakala kosesho, njll.
Isikhathi sokufunda: 5 imizuzu Uyazi ukubaluleka kokumakethwa kwamavidiyo ngobukhona be-inthanethi bebhizinisi lakho lezezakhiwo? Akunandaba ukuthi ungumthengi noma umthengisi, udinga umazisi womkhiqizo othembekile nodumile ukuheha amaklayenti. Ngenxa yalokhu, umncintiswano wokumaketha kwezezakhiwo unolaka kangangokuba awukwazi ukukhulisa kalula ibhizinisi lakho elincane. Ngenhlanhla, ukumaketha kwedijithali kunikeze amabhizinisi abo bonke osayizi ngezinto eziningi eziwusizo ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo. Ukumakethwa kwevidiyo ngu
NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 27, 2020 UTom Siani
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Namuhla izinkundla zokuxhumana zinendima ebalulekile engayidlala ezimpilweni zethu. Izigidigidi zabantu emhlabeni wonke ziyazisebenzisa ukuxhumana, ukuzijabulisa, ukuzijabulisa, ukufinyelela izindaba, ukucinga umkhiqizo / insizakalo, isitolo, njll. Iminyaka yakho noma isizinda sakho akubalulekile. Ukuxhumana nabantu kuzothinta kakhulu inqubo yakho yansuku zonke. Ungafinyelela kubantu abanezintshisakalo ezifanayo nezakho futhi wakhe ubungani obuhlala isikhathi eside ngisho noma ungaziwa. Ungazwelana nabanye abantu abaningi ngaphesheya